XOG:- Sababta uu Siyaad Maxamuud Shire uga tagay xilkii looga magacaabay madaxtooyadda (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Sababta uu Siyaad Maxamuud Shire uga tagay xilkii looga magacaabay madaxtooyadda (AKHRISO)
Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo baxaayay in Siyaad Maxamuud Shire oo ka mid ah saaxiibadii ugu dhawaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo uu iska casilay xilkii looga magacaabay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya.
Siyaad Maxamuud Shire oo hore ugu magacawnaa qunsulka Soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudiga islamarkaana qeyb ka ahaa ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa si KMG ah xil looga magacaabay madaxtooyadda Soomaaliya, waxaana haatan soo baxaaya warar sheegaya inuu xilka iska casilay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maalintii ugu horeeysay markii uu xilka la wareegay xilal u magacaabay Siyaad Maxamuud Shire iyo seddax qof kale, waxaana Siyaad xilligaasi si KMG ah loo magacaabay xilka hab maamuuska madaxtooyada Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in Siyaad Maxamuud uu haatan ka dhoofay magaalada Muqdisho, kadib markii uu xaqiiqsaday inaan xil wasiir loo magacaabi doonin.
Xogtaasi ayaa sidoo kale sheegaysa in iscasilaada Siyaad Maxamuud Shire ay salka ku hayso, kadib markii uu ka warhelay in nin kale oo kasoo jeeda beeshiisa uu madaxweyne Farmaajo doonayo inuu xil wasiir uga magacaabo xukuumadda lasoo dhisi doonno, taas oo keentay inay labadooda isku dhacaan islamarkaana iska casilo xilkii looga magacaabay madaxtooyadda Soomaaliya.